सेल स्वागत 'एन’ डांडी
क्लासिक स्व लघु नाउ योजनाहरु र प्रतिमान निर्माण
यूहन्ना Sheen द्वारा डिजाइन, संयुक्त राज्य मा Wight को Cowes आइल मा आधारित, यी प्रयास र परीक्षण गर्दै छन् डिजाइन डुङ्गा भवन मा एक जीवनकालमा आधारित.
Sail'n'Oar आपूर्ति प्रतिमान सही बिल्डर धेरै समय र खर्च बचत गर्न कटौती गर्दै. तिनीहरूले बस मा आफ्नो डुङ्गा निर्माण गर्न रूपरेखा बनाउने सहायता गर्न छैनन्, वास्तवमा भन्ने कुनै पनि आवश्यक छ. निर्माण डिजाइन निर्माण समय कम गर्न सिर्जना गरिएको छ. त्यहाँ रेखाचित्र स्केल कुनै आवश्यकता छ, कठिन क्षेत्रमा वरिपरि टेम्प्लेट र शास्त्राी बनाउन. बस काठ मा ढाँचाको ठाँउ, मार्क वरिपरि र बाहिर कटौती.
सजिलो गठन परियोजनाहरु – तपाईं निर्माण गर्न लागि क्लासिक नाउ हाम्रो सीमा योजनाहरु
पाल N OAR सुरुआत ट्रोले
चिनो र आफ्नो काठ काट्न गर्न ढाँचाको प्रयोग गरेर किरा डुङ्गा तपाईं आकारहरू तपाईं सजिलै आफूलाई व्यवस्थापन हुनेछ बाहिर कटौती गर्न तिर्ने छन् जहाँ खरीद भन्दा टाढा थप आर्थिक छ. तपाईं संभावना पनि काठ र प्लाईवुड को लागत मा एउटा ठूलो सम्झौता सुरक्षित हुनेछ.
सबै को सबै भन्दा तपाईं गर्व हुन जो एक क्लासिक डुङ्गा सिर्जना को सन्तुष्टि हुनेछ, र आउन वर्ष को लागि आफ्नो परिवारको लागि एउटा सम्पत्ति.
पहिले मार्गदर्शन डाउनलोड, र ढाँचाको किन्न तपाईं यसलाई कसरी सरल हुन सक्छ फेला पारेका छौं पछि. ढाँचाहरू रोल्ड छन्, र सुरक्षित ट्यूब मा पैक. तिनीहरूले आफ्नो घर वा कार्यशाला गर्न कुरियर मार्फत पठाइएको छन्.
लागि नयाँ 2017
पाल 'एन’ डांडी FLATTIE नाव – विवरण लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
हाम्रो वेबसाइट भ्रमण लागि धन्यवाद